Tohin'ny voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008
Nampidirin'i radotiana | 14 Nov, 2008
Mitohy ny tantara hoy ny Zain... Asa na efa firy izay no efa nahazo an'ireto fiara tsy tontan'ny ela noravahana ny lokon'ny Zain ireto. Tsy tena resy lahatra amin'ny fahombiazan'ny Zain aloha aho hatreto. Tsy mety tafapaka any Dago mihitsy mantsy ny antsoko raha vao laharana finday an'ny Zain no antsoiko avy aty Etazonia.
Mitombo isa hatrany ny gazety antsoratra. Nahatsapa aho talohan'ny nandehanako ho any Dago teo fa tahotra sy horohoro indray no azoko fa tsy mba fafiny tamin'ny famakiana gazety gasy "online." Fanafihana mitam-basy sy vono olona mahatsiravina matetika no voatatitra. Tsy dia tsapako loatra anefa aloha ilay tsy fandriam-pahalemana rehefa tena tonga tany.
Tohizana kely ny loko volom-parasin'ny Zain :-)
Anosy amin'ny nahitako azy andro vitsivitsy lasa izay.
Na dia maniry ohatran'ny anana aza anefa ny trano simenitra voaravaka fitaratra manjelatra ao andrenivohitra dia mbola maro koa ireo miaina ao anatin'ny fahatsorana tanteraka. Tany mena, hazo sy fantsika ary bozaka sy taretra ny akora ampiasaina dia vita.
Toamasina amin'ny endriny ankehitriny.
Ampahany amin'ireo làlana nohavaozina. Efa misy kodiaran-telo koa ny posy any arak'ireny nitanteran'i Jentilisa azy tany aloha ireny. Mbola vohizin-togotra kosa anefa fa tsy toy ny KINGA ao Antsirabe.
Tamin'iny faritry Vatovavy Fitovinany iny.
Tonga tany ihany ny aron'akanjo nalefan-dRamose fa ny dabilio... Valo isaky ny dabilio kosa ve?
Manazava be amin'ny teny frantsay i ramose teto...
Efa teny Ivato aho no navoakan'i T... avy any ampaosiny any ity karatra mena ity. "ento any ity ry Rado hoy izy hapetrakao amin'ny blaogy". Tadidiny hay ilay resakay teny andalana. Mpanamory ireny fiara tsy matahotra lalan-dratsy ireny izy. Matetika hono izy no antonin'ireny jôbakely ireny dia ilazany hoe "za ramose mba hividiano mofo fa homeko mofo anie ramose eh". Ohatran'ny tsy teo hoy i T... no hakako ity karatra mena ity avy ao anaty poketrako. " iny ny andry" hoy hono izy sady atohony amin'ilay jôba ilay izy. Mitsoaka mandositra avy hatrany hoy izy izay tratrako sady toran'ny hehy.
Nanatitra ahy hiondrana koa moa ilay zandriko lahy be hanihany izay ka avy hatrany izy dia nitsatsaingoka sady nisintona ilay karatra teny amin'i T.... "mba fantatrareo ve moa ry T... ny antony nitsoahan'ilay jô?
"Vakio mivadika anie io soratra io eh."